Layliyo iyo Tababar - Vondt.net - Bogga 2 ee 34
5 Jimicsi loogu talagalay Xanuunka Jiirka
10 / 08 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles, Jimicsiga iyo Jimicsiga/av waxyeelladayda
5 jimicsi oo yareyn kara xanuunka daanka. Layligani waxay yareyn karaan xanuunka daanka waxayna yareyn karaan astaamaha, sidoo kale waxay si fiican u bixin karaan aagga. Way fududahay in la iloobo inaad jimicsi samayn kartid isla markaana aad u kala bixin kartid xanuunka daanka si la mid ah qaybaha kale ee jidhka. Haddii aad su'aalo ka qabtid laylisyada ama tababarka, fadlan nala soo xiriir adoo adeegsanaya Facebook eller YouTube.
Ma ogeyd in shaqada liidata ee qoorta iyo garbaha sidoo kale ay sababi karto xanuun daanka? Hoos u dhaadhac si aad u aragto fiidiyowyo tababar oo aad u fiican oo leh laylyo caawin kara jahwareerka ..
VIDEO: 5 Dhar Dhar ah Oo Looga Soo Horjeedo Stiff Neck iyo Jaw xanuunka
Miyaad qabtaa xanuun qoorta iyo daanka? Markaa inteeda badan xasaradda daankaaga waxay ka iman karaan qoortaada. Dad badani ma ogaanin in murqaha qoorta xasaasiga ahi ay tixraacayaan xanuunka madaxa, xarkaha iyo daanka, iyo sidoo kale inay gacan ka geystaan ​​waxa loo yaqaan madax xanuunka qoorta.
Halkan waxaa ah shan jimicsi iyo jimicsi fidin ah oo kaa caawin kara inaad dabciso murqaha qoorta oo xanuuna, ku siiya dhaqdhaqaaq qoorta oo fiican iyo yareynta xanuunka daanka.
Qoorta, daanka iyo garbaha waa saaxiibo qurxoon - ama, ugu yaraan, waa inay ahaadaan. Haddii mid ka mid ah qaabdhismeedka jirka uusan si sax ah u shaqeyn, markaa tani waxay u horseedi kartaa xanuun iyo cillad xagga labada kale ah.
Tababbarka dabacsan ayaa kaa caawin kara inaad dib u soo ceshato shaqadii caadiga ahayd iyo xooggii garbaha iyo garbaha garbaha - taas oo iyaduna qoortaada iyo daamankaaga ka yarayn karta culeyska xad dhaafka ah. Guji hoos si aad u daawato fiidiyaha tababarka.
Muxuu qofku ugu dhaawacmaa daanka?
Dad badani waxay la kulmaan xiisadaha daanka iyo dhibaatooyinka calalashada sababtoo ah nolol maalmeedka cakiran - tani badanaa waxay sabab u tahay muruqyada adag (i.a. xanjo weyn, masseter) iyo inuu yareeyay dhaqdhaqaaqa wada jirka ee daanka. Marka muruqyada qaar ay si aad ah ugu jiidaan hal jiho, waxaa jiri kara isku dheelitir la'aan muruq.
Badanaa tan waxaa loo yaqaannaa cudurka 'TMJ syndrome', halkaasoo TMJ ay u taagan tahay wadajirka ku meel gaarka ah. Haddii kale, waxaa lagugu dhiirigelinayaa inaad ku darsato laylisyadan socodka, baaskiil wadista ama dabaasha - sida jidhkaagu u oggol yahay. Xor ayaad u tahay inaad raadiso sanduuqa raadinta ee hagitaan jimicsi oo wanaagsan oo aan horay u dhajinay. Waxaan kugula talineynaa kuwan, iyo waxyaabo kale jimicsiyada fidsan ee ka soo horjeeda qoorta adag, maadaama qoorta iyo daanka ay si toos ah isugu xiran yihiin.
1. "Carrab afka ka soo horjeeda"
Layligani wuu hawl galaa oo tababaraa inta badan qayb aan jilicsanayn oo muruqyada daanka, taas oo ah muruqyada digastricus - kaas oo gacan ka geysanaya furitaanka daanka (haddii uu daciif yahay, tani waxay noo horseedi kartaa inaan si qunyar u qaniino nolol maalmeedka iyo xiisado ka dhasha).
Afkaaga xir adigoon qaniinin - ka dibna caarada carabkeeda ha ku cadaadiyo saqafka godka afka oo ceshada cadaadiska 5-10 sekan. Kadib naso 5-10 ilbiriqsi, kahor intaadan ku celcelin jimicsiga 5 nooc. Jimicsiga waa la samayn karaa maalin kasta.
2. Furitaanka afka - oo leh iska caabin (jimicsi qayb ahaan isometric ah)
Dhig suulkaaga ama labada farood garkaaga hoostiisa. Kadib afkaaga si tartiib ah u kala fur adigoo tartiib tartiib ah suulka ugu riixaya - waa inaad dareentaa inay ku siinayso xoogaa iska caabin ah. Cadaadiska hayso 5 ilbidhiqsi ka dibna afkaaga mar kale xir. Ku celi jimicsiga in ka badan 5 ku celcelin iyo 3 nooc. Jimicsiga waa la samayn karaa maalin kasta.
3. Xiritaanka Afka - oo leh iska caabin (jimicsi qayb ahaan isometric ah)
Dhig suulkaaga garkaaga hoostiisa iyo labada farood inta u dhexeysa aagga hoostiisa afka iyo garkaaga. Si tartiib ah hoos ugu riix markaad afkaaga xireyso. Ku celi jimicsiga in ka badan 5 ku celcelin iyo 3 nooc. Jimicsiga waa la samayn karaa maalin kasta.
4. Dhinac dhinac ah
Layligani waa in loo sameeyaa si taxaddar leh, maxaa yeelay dhaqdhaqaaqa gadaalku ma aha qayb aad u badan oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa daanka. Dhig wax qiyaastii 1 cm oo dhumuc ah dhexdooda ilkaha dhexdooda oo si tartiib ah u qaniina - ka dibna daanka si aad u deggan u dhaqaaji dhinac ilaa dhinac. Halkan waa inaad ku dhaqdhaqaaqdaa oo keliya markaad jimicsiga samaynayso. Waa lagu celin karaa in ka badan 10 jeer - oo leh 3 nooc. Waa la samayn karaa maalin kasta.
5. Dhaqdhaqaaqa hore ee daanka hoose - oo leh iska caabin
Dhig wax qiyaastii 1 cm qaro weyn leh dhexdooda ilkaha dhexdooda oo si tartiib ah hoos ugu qaniini cadaadis fudud. Ka dib sedex farood dhig dhanka garka ka dibna u wareeji garka si tartiib ah hore ilaa ilkaha hoose ay la jaan qaadayaan ilkaha kore. Samee wax ka badan 5 jeer - oo leh 3 nooc. Waa la samayn karaa maalin kasta.
Jimicsiyada aan isticmaalnay waxaa laga soo qaatay tilmaamaha Cusbitaalada Jaamacadda Oxford iyo Ururka Mareykanka ee Dhakhaatiirta Qoyska - sida ilo xoog leh. Haddii aadan hubin inaad sameyn kartid leyliskan, fadlan la tasho dhaqtarkaaga ama takhtarkaaga ka hor intaadan bilaabin.
Xor ayaad u tahay inaad la wadaagto maqaalkan asxaabtaada, asxaabtaada iyo dadka aad taqaan. Haddii aad rabto maqaallo, jimicsi ama wixii la mid ah oo loo soo diro dukumiinti ahaan ku celcelin iyo wax la mid ah, waxaan ku weydiineynaa sida, casuuma asxaabtaada oo la xiriir adoo adeegsanaya bogga Facebook iyada. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, kaliya si toos ah uga faallo maqaalka adoo adeegsanaya qaybta faallooyinka ee qaybta hoose ee maqaalka - ama si aad noola soo xiriirto (gebi ahaanba waa bilaash!) - waxaan sameyn doonaa intii karaankeena ah sidii aan kuu caawin lahayn.
PAGE xiga: - Daanka oo xanuuna? Waa inaad tan ogaataa!
- Ma dooneysaa macluumaad dheeri ah ama waxaad qabtaa su'aalo? Weydiiso bixiyahayaga daryeelka caafimaad ee aqoonta u leh si toos ah (gebi ahaanba bilaash ah) annaga oo adeegsanaya annagaFacebook Page ama iyada oo loo marayo “Weydii - Hel Jawaab!"-Spalte.
(Waxaan isku dayeynaa inaan ka jawaabno dhammaan farriimaha iyo su'aalaha 24 saac gudahood. Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa inaan kuu sheegno jimicsi ku habboon dhibaatadaada, kaa caawin doona inaad hesho daaweeyeyaasha lagugula taliyay, tarjumi jawaabaha MRI iyo arrimo la mid ah. maalin wadahadal saaxiibtinimo ah)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Vondt-i-kjeven.jpeg?media=1648573622 410 995 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-08-10 11:34:522022-03-18 17:27:195 Jimicsi loogu talagalay Xanuunka Jiirka
5 jimicsi yoga ah oo ka dhan ah Stiff Neck
08 / 08 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles, Jimicsiga iyo Jimicsiga/av waxyeelladayda
5 Jimicsiyada Yoga Ka dhanka ah Stiff Neck
Miyaad ku dhibtay qoor adag? Halkan waxaa ah jimicsiyo 5 Yoga ah oo kaa caawin kara kor u kaca dhaqdhaqaaqa qoorta iyo yareynta qallafsanaanta qoorta. Xor baad u tahay inaad la wadaagto qof qaba cabashooyinka qoorta.
Jimicsiyada yoga iyo yoga waxay waxtar yeelan karaan markay tahay nasashada muruqyada adag iyo murqaha. Intooda badan waxaan fadhiyaa wax aad u badan nolol maalmeedka taasna waxay sababtaa muruqyada qoorta, dhabarka, sinta, dhabarka bowdyaha iyo kursiga inay aad u adkaadaan. Fidinta joogtada ah iyo dhaqdhaqaaqa waxay noqon kartaa cabiraad wanaagsan oo looga hortago murqaha adkaanta iyo kala goysyada adag. Waxaan kugula talineynaa in laylisyadaas si wada jir ah loo sameeyo jimicsiyadaan xoogga ah ee sinta og Dhabarkooda saameynta ugu badan - iyo sidoo kale kuwan u habeeyey jimicsiyada xoogga ee qoorta.
1. Urdhvamukhasvanasana (Booska eyga qiimeeya)
2. Uttana Shishosana (Yoga booska loogu fidinayo laf dhabarta oo dhan)
Jagada yoga oo kala fidisa dhabarka oo dhan qeybta hoose ilaa iyo u gudbida qoorta - muruqyada aan wada ognahay inay adkaan karto in si wanaagsan loo kala bixiyo. Way fidsan tahay waxayna siinaysaa dabacsanaan badan dhabarka hoose iyo kore. Jilbahaaga istaag oo jirkaaga horay ha uusoo taago gacmo fidsan sida sawirka ka muuqata - hubi inaad tan ku sameyso dhaqaaq xakameysan, deggan. Raadi booska ay si fudud u kala bixinayso oo ku hay 30 ilbiriqsi ka hor intaadan ku celcelinin 3-4 nooc.
3. Marjariasana Bitilasana (Jimicsiga geela Bisadaha)
4. Ardha Matsyendrasana (Jimicsiga rogista)
Jagadan fadhiga ah ee yoga waxay siisaa dabacsanaanta iyo dhaqdhaqaaqa lafdhabarta iyo murqaha dhabarka - sidoo kale guud ahaan waxaa lagula taliyaa dhabarka oo dhan. Waxay noqon kartaa jimicsi hawl badan, markaa ha isku dayin tan haddaadan ku qanacsanayn laylisyada kale ee maqaalka ku jira. Neefsasho qoto dheer u qaad oo si deggan ugu leexo dhinaca - ha dhuuqin, laakiin halkii aad si deggan ugu dhaqaaq dhinaca. Ku hay booska 7-8 neefsasho qoto dheer ka dibna ku celi dhinaca kale.
5. Viparita Karani (Lugaha oo ku fidsan gidaarka)
Viparita Karani waa qaab yoga oo jirka siiya nasasho sifiican u qalma iyadoo cadaadiska ka saareysa qoorta iyo dhabarka. Markaad sameynayso jimicsigaan, u isticmaal jaakad yoga iyo shukumaan si loo kordhiyo xasilloonida sinta Waxaad ogaan doontaa dhererka dhererka kugu habboon adiga - tijaabi masaafada u jirta gidaarka iyo xagasha lugaha. Iskuday inaad lugahaaga toos ka dhigto adigoo garbahaaga iyo qoortaada dib ugu soo dhacaya dhulka. Si tartiib ah qoortaada dib ugu celi oo gacmahaaga dib ugu laabo gacmahaaga. Ku hay booskan 5-10 daqiiqo intaad si deggan u neefsato oo aad kontoroosho.
Rullaluuduhu wuxuu noqon karaa aalad waxtar leh oo wanaagsan oo loogu talagalay abaabulidda kala -goysyada iyo muruqyada laf -dhabarka - taas oo iyaduna kor u qaadeysa dhaqdhaqaaq ka wanaagsan qoorta adag iyo xanuun. Talo fiican adiga oo u baahan inaad "milmi" xoogaa. Saamaynta ugu badan waxaan ku talinaynaa xumbo xumbo this (dhagsii halkan - furitaanka daaqad cusub) kana socota Epitomi.
SAMEEYSO: - 5 Jimicsi Wanaagsan Oo Lid Ku Ah Garabka Xun
Tijaabi waxyaabahaas oo kale: - 5 Jimicsiyo Wanaagsan oo Lagaga Hortago Sciatica
AKHRISO: - 6 Jimicsi Xoog Xoog Ah oo Loogu talagalay Sore Knee
MA OGTAHAY: - Daaweynta qabow waxay yareyn kartaa xanuunka xanuunka iyo kala goysyada murqaha? Waxyaabaha kale, Biyo qabe (halkan waad ku dalban kartaa), oo ka kooban inta badan alaabada dabiiciga ah, waa badeecad caan ah. Nagala soo xiriir maanta boggayaga Facebook haddii aad u baahan tahay talooyin kale oo adiga kugu habboon.
AKHRISO: - Hal koob oo biir ah ama khamri loogu talagalay lafaha adag? Haa fadlan!
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Yogaøvelser-for-stiv-nakke.jpg?media=1648573622 500 1000 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-08-08 20:44:082022-03-18 17:27:075 jimicsi yoga ah oo ka dhan ah Stiff Neck
Bogga 2 ee 34<1234>»